Queen Mary, Letizia, na Maxima na Royal Party na Denmark - Ụdị
Hụ ụfọdụ Royals kacha mma nke ụwa na otu nnukwu oriri
A bịa n'ụdị eze, e nwere ụmụ nwanyị ole na ole na -amaja onye ọ bụla. Kate Middleton, n'ezie, kamakwa Queens Letizia na Maxima, na Princess Mary. Nwanyị ọ bụla bụ nnukwu ụdị ike n'obodo ya, mana ọ na -esiri anyị ike ịhụ ha ka ha mara mma niile ọnụ . Nke ahụ gbanwere, ekele maka ọmarịcha oriri ọmụmụ ụbọchị iri asaa na ise maka Queen Margrethe II nke Denmark (mana ọ dị ezigbo mkpa - tiara ndị ahụ!).
Princess Mary amuru Australia mere emume ncheta ọmụmụ nne di ya na uwe mwụda pink nke dara n'ubu ya. Ọ bụrụ na ịmụrụ anya ya niile maara nke ọma, enwere ihe kpatara ya: O yi akụkụ ya na foto gọọmentị ya.
Nwanyị nwanyị nke Spain Letizia na -aga n'ihu na -enwekwu ọmarịcha kemgbe e chiri ya echichi n'oge ọkọchị gara aga. Maka ihe omume a, ọ pụtara na mpụga igbe siri ike, were uwe mwụda na-acha ọcha na ọcha.
N'ịbụ onye amaara maka ụtọ ya niile, Queen Maxima emechighị ihu na uwe mwụda gbara agba na nza nke diamonds.
kedu ihe ọjọọ ihe onye brazilị na -afụ ụfụ
Princess Marie nke Denmark mere ụdị ọmarịcha eze, yi akwa lace navy na aka aka.
Kedu eze mara mma nke na-ahọrọ nke kachasị mma?
usoro ihe nkiri dị mma nke ukwuu
mee ụmụ nwanyị dị ka porn nwoke nwere mmasị nwoke
kedu oge mmewere grey dị ugbu a